Idol တွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင်လိုင်းဖက်ကို ကူးပြောင်းလာတဲ့ အမျိုးသားအဆိုရှင်တွေ အများအပြားပါပဲ။ SHINee အဖွဲ့ဝင် Minho ဆိုရင်လည်း ဂူဂျေဟီး – အမြင့်ခုန်ကားကတည်းက ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိခဲ့ရာ ၂၀၂၁ ထဲမှာပဲ ဇာတ်လမ်းသစ်အတွက် ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးမယ့်အကြောင်း အတည်ပြု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တွဲဖက်မင်းသမီးက Chae Soo Bin ဖြစ်ပြီး Netflix ရဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်မယ့်အကြောင်း နိုဝင်ဘာ (၁၈) ရက်နေ့က အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ “‘The Fabulous’ ကို ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးဖို့ သေချာသွားပြီဖြစ်ပြီး အဓိကဇာတ်လိုက်တွေအဖြစ် Chae Soo Bin နဲ့ Minho တို့က တွဲဖက်ရိုက်ကူးသွားမှာပါ” လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“The Fabulous” ဇာတ်လမ်းသစ်က‌တော့ လူငယ်တွေကြားက ကြိုးစားမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ကြည်နူးစရာအခိုက်အတန့်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြား ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု အကြောင်းကို အဓိကထားရိုက်ကူးသွားမှာပါ။ ဖက်ရှင်နယ်ပယ်ကို အဓိကဇာတ်အိမ်တည်ထားပြီး အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာ နေရာတစ်ခုရဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားရပုံတွေ၊ အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားရင်း နာမည်ရလာဖို့ နေ့တဓူဝရုန်းကန်ရပုံတွေကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးပြသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Chae Soo Bin ဟာ နာမည်ကြီး Brand တွေရဲ့ PR agency မှ မန်နေဂျာ Pyo Ji Eun အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မှာပါ။ သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်က ငယ်စဉ်ကတည်းက လှပတဲ့အရာလေးတွေကို ချစ်တတ်ပြီး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း သူမဘဝမှာ အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်လောကရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ အရာရာကို တိုက်ခိုင်ရင်ဆိုင်ကာ ထိပ်ဆုံးရောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူပါ။
Minho ကတော့ ရုပ်ရည်အရည်အချင်း အားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့ အလွတ်တမ်း photo retoucher တစ်ဦးဖြစ်သူ Ji Woo Min အဖြစ် သရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကောင်ကတော့ စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိဘဲ အလုပ်နဲ့ကော အချစ်နဲ့ပါ နှောင်ဖွဲ့လို့မရတဲ့ လူစားပါပဲ။ မန်နေဂျာမလေး Pyo Ji Eun နဲ့ကလည်း သူငယ်ချင်းမကျ ရည်းစားမကျ ခံစားချက်ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်မှုကလည်းရှိနေပါတယ်။
ဒီလို စိတ်ဓာတ်မတူညီတဲ့ ဇာတ်ကောင် ၂ ယောက်က ဘဝရှေ့ရေးအတွက် အတူတူရှေ့ဆက်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား? အလုပ်နဲ့ မေတ္တာ မျှတရင်း ဘဝအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလား? ဆိုပြီး လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ လူငယ်တို့သဘာဝတွေလည်း အများအပြားပါဝင်မှာဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုရင်း ခံစားချက်တွေ တိုက်ဆိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Next Joy ရဲ့ drama အသစ်ရိုက်ကူးမှုကို ဝိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ Red Velvet အဖွဲ့ဝင်​များ »
Previous « သမိုင်းဝင်ပ​ရောဂျက်တစ်ခုကို အတူဖန်တီးသွားကြမယ့် ၂၁ ရာစု ဂီတ​လောကရဲ့ အထင်ကရ solo artist ၃ ဦး